Video:-Ilhaan Cumar oo ka jawaabtay fadeexadii lagu sheegay in ay walaalkeed soo guursatay 2009 | Faafan News
Video:-Ilhaan Cumar oo ka jawaabtay fadeexadii lagu sheegay in ay walaalkeed soo guursatay 2009
(FAAFANNEWS)…llo xog-ogaal ah ayaa sheegaya in arrintan ku aadan fadeexaynta Ilhaan Cumar uu ka danbeeyo Cabdi Warsame oo ah Soomaali ka tirsan golaha magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota,Cabdi ayaa si aad ah uga soo horjeeda tartanka Ilhaan.
Cabdi Warsame ayaa la sheegay inuu doonayey inuu kursiga Ilhaan u tartamo doorashada dhaceysa bisha November ee Ilhaan ay u taagan tahay maahee doorashada ku xigta oo dhaceysa sanadda 2018.
Cabdi Warsame oo sida Ilhaan oo kale isna ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa la sheegay inuu heshiis la galay Phyllis Khan oo ah haweeneyda Ilhaan ay ka adkaatay. Heshiiska ayaa dhigayey in Cabdi uu taageero Phyllis doorashadan, kadibna ay kursiga u baneyso doorashada xigta ee 2018-ka.
Hadaba fadeexadan oo ay warbaahinta Maraykanku ka hadashay,waxaa markii danbe war qoraal ah kasoo saartay musharaxad Ilhaan Omar,qoraalka Ilhaan ay jawaabta uga dhigtay eedayntaas ayaad ka akhrisan kartaan hoos,sidoo kale waxaad hoos ka daawan kartaan muuqaalka Tv-ga caalamiga ah ee Fox News uu kaga hadlay fadeexayntaas.
Halkan ka akhriso qoraalka oo somaliya:-
Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaali ah uu sharaxan inay ka mid noqoto aqalka wakiilada gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sharaxaad ka bixisay eedeymo ku saabsan qiyaamo xagga guurka ah oo ay sameysay.
Ilhaan oo lagu eedeeyey inay walaalkeeda dalka Mareykanka ku keentay inuu yahay ninkeeda xilli ay qabtay ninka hadda qaba ee ay ilmaha u dhashay ayaa sharaxday sida ay u dhaceen labada guur ee la isku hayo.
Ilhaan waxay qirtay inay jiraan labada guur, waxayse beenisay inay guursatay walaalkeeda si ay Mareykanka u keento. Bayaan ay soo saartay ayaa u qornaa sidan:‐
“Sanaddii 2002, aniga oo 19 jir ah ayaa waxaan is guursanay Axmed Xirsi, oo inta uusan noqon muwaadin Mareykanah loo yaqaanay Axmed Aadan, kaasi oo ah ilmaheyga aabahood iyo jaceylkeyga. Waxaan codsanay shahaado nikaax, balse ma aynan helin, sida darteedna guurkeena sharci ma ahayn marka loo eego sharciga Mareykanka, balse wuxuu ku saleysnaa xagga dhaqanka Islaamka. Sanaddii 2008, ayaan go’aansanay inaan kala tagno, markii xaalkeena xumaaday, si waafaqsan diinta.
Kadib waxaan xiriir la yeeshay muwaadin Briĕsh ah oo lagu magacaabo Axmed Nuur Saciid Cilmi, waxaana is guursanay sanaddii 2009. Xiriirkeena wuxuu dhamaaday 2011 waana kala tagnay si waafaqsan diinteena. Kadib wuxuu ku laabtay dalkiisa UK.
Laakin marka loo eego sharciga Mareykanka isagaa weli igu xiran, waxaana wadaa inaan iska furo. Wararka ah in Axmed Nuur uu yahay walaalkee waa been iyo aflagaado. Wixii ka dambeeyey 2011 illaa iyo hadda waxana dib u heshiinay ninkeygii hore Axmed Xirsi oo aan dib isugu guursanay diinteena, haddana aan wada korsaneyno ilmaheena